I-samsung kungekudala izokwazisa ngesixhobo esitsha se-vr yentloko (yenqaku5 kunye nomnyele we-galaxy s6 +)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Isamsung kungekudala iza kuphehlelela i-headset ye-Gear VR entsha (ye-Kumbuka5 kunye ne-Galaxy S6 Edge +)
Isamsung kungekudala iza kuphehlelela i-headset ye-Gear VR entsha (ye-Kumbuka5 kunye ne-Galaxy S6 Edge +)
Emuva ngo-Matshi, xa i-Samsung yabhengeza i-Galaxy S6 kunye ne-S6, inkampani nayo ityhile iseti yentloko entsha yeGear VR Ukuhamba neziphatho ezibini eziphathwayo. Sasilindelwe ukuba silinde enye iGear VR entsha ukuba iboniswe namhlanje, ecaleni kweGalaxy Note5 kunye neGPS S6 +, nangona oko kungenzekanga. Kodwa i-Samsung ilungiselela ukwazisa i-headset entsha yokwenyani.
Ngokwe-CNET, umphathi we-Samsung u-JK Shin uqinisekisile ukuba isizukulwane sesithathu seGear VR kufuneka sikhululwe ngamanye amaxesha & kungekudala; Isamsung inokufuna ukubonisa i-headset entsha kwi-IFA 2015 ekuqaleni kukaSeptemba, xa inkampani iceba ukubhengeza Izixhobo S2 ISETYHULA iwotshi smart.
Ngokucacileyo, i-Samsung Gear VR ezayo kufuneka isebenze kunye ne-Note5 kunye ne-Galaxy S6 edge +. Ukusukela ukuba iimodeli ezimbini zangaphambili zeGear VR zithengiswe nge- $ 199.99, sicinga ukuba entsha iya kubiza malunga ne- $ 200. Oku, nangona kunjalo, kuhlala kuqinisekiswa.
P.S: Iseti yentloko eboniswe ngasentla yiGear VR ye-Samsung Galaxy S6 kunye nomda we-S6.
umthombo: I-CNET nge SamMobile
Sebenzisa i-waze ene-Android auto app
IMicrosoft Lumia 640 iya kuba yeyokuqala ukufumana Windows 10 hlaziya
Inqaku leSamsung ye-Samsung S6 kunye ne-S6 kulula ukuyisebenzisa ukuprinta iminwe